Obengumabhalane usefuye izingulube
UNKK Nontobeko Masinga weMasinga Piggery ephethe elinye lamachwane engulube Isithombe: SITHUNYELWE
Phili Mjoli | May 8, 2021
AKAZISOLI ngokudayisa umuzi wakhe osedolobheni ayokwakha emakhaya owesifazane ongumlimi ofuye izingulube.
UNkk Nontobeko Masinga (44) , weMasinga Piggery eseMalangeni eMzinto, uthe ngesikhathi eqala ecabanga ngezinto angazenza kwakufika ezolimo kodwa uma ebheka indawo eNewlands lapho ebenomuzi khona nakubo eNtuzuma lapho ezalelwe khona, angayiboni indawo angenza khona ibhizinisi lezolimo.
"Ngizalelwe elokishini, anginawo amakhaya bekuthi njalo uma ngihambe nesonto ngibone kuluhlaza kulezi zindawo ezisoGwini (South Coast), ngezwa ngiyithanda. Ngenziwa nawukuthi vele ngiyazithanda ezolimo. Ngaqala ngifuna indawo ngaze ngayithola eMalangeni," kuchaza uNkk Masinga.
Uthe yena nomndeni wakhe bawudayisa umuzi osedolobheni baya emakhaya ngoba bengafuni ukuthi kube nento ezobabuyisela edolobheni.
AMACHWANE ezingulube asehlukaniswe nonina eMasinga Piggery Isithiombe: SITHUNYELWE
Yena washiya nomsebenzi wokuba umabhalane esikhungweni sezempilo.
"Ingulube yisona silwane engathanda ukusifuya. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi iyinuku kodwa mina ngokubona kwami iyinono into eyenza ukuthi ifoshe phansi yingoba isuke ifuna amanzi. Uma uyakhele kahle igoqo wase ufaka amanzi, ayingcoli. Mina ngiyithanda kabi ingulube ikakhulukazi njengoba isingingenisela imali uthando lwayo selukhule kakhulu kunakuqala," kusho uNkk Masinga ehleka.
Uthe uqale wathenga izingulube kubantu azikhulise azidayise sezikhulile noma aziyise emadeleni.
"Ngo-2017 ngithathe isinqumo sokuthi ngithenge izingulube ezidayiswa kubadayisi bezingulube abaziwayo ukuze sikwazi ukwandisa ibhizinisi lethu ngoba ingulube ethengwe kumuntu usuke ungazi ukuthi ibidlani akufani nengulube ethengwe kubadayisi abangaphansi komkhandlu odayisa izingulube ngoba balandela imigomo," kusho yena.
Manje uthe unezingulube eziyizinsikazi (sows) ezingu- 33, izinkunzi (boars) ezintathu, ezisancela ezingu-120, esezilunyuliwe (weaners) ezingu-140, esezilungele ukudayiswa noma ukuhlinzwa (growers) ezingu- 50.
Uthe amakhasimende akhe amakhulu izibhedlela azidayisela inyama.
"Kube lula kimi ukuthi ngixhumane nezibhedlela ngoba vele bengisebenza eMnyangweni wezeMpilo. Njengamanje uMnyango wezoLimo uyasiqeqesha ukuze sikwazi ukwenza ubhekeni, amasoseji, ama-wors nokunye okwenziwa ngenyama yengulube. Angikangeni emasuphamakethe nasemabhusha ngoba bafuna ukuthi kube yibo abakutshelayo ukuthi kumele ubadayisele ngamalini umkhiqizo wakho, ugcine wena ungazuzi lutho," kusho yena.
Uthe kuleli bhizinisi uqashe omakhelwane bakhe abangomama abane nabo abanothando lwezingulube.
Ubuye asebenze nezingane zakhe uNtokozo noNjabulo. UNtokozo wenza izinongo nosawoti abalungele ukunonga inyama yengulube, umfowabo usiza unina ngomsebenzi oqondene ngqo nezingulube.
"Umama ubuye adayise inyama yengulube manje abantu baye bafune izinongo nosawoti. Ngibone ukuthi angigxile ngapha kulo mkhakha mina. Ngitshala ama-herbs enginonga ngawo ama-spice ngiwomise, ngiyawagaya bese ngihlanganisa nezinye izinongo. Emikhiqizweni yami kukhona nosawoti olungele amakhasimende angezwani nezinongo," kusho uNtokozo.
UNkk Masinga uthe zikhona izinselelo abhekene nazo, enkulu kakhulu ukuthi amanzi ayaphela endaweni kanti izingulube ziwadinga kakhulu amanzi.
"Indawo esikuyo inawo amanzi phansi kodwa asikabi nayo imali yokukhokhela inkampani engasisiza ngokudonsa amanzi phansi. Kubiza kakhulu ukuwadonsa phansi.“
Okunye athe kuyinselelo ukuthi abanawo amadela okungawabo, kumele izingulube ziyohlinzwa kwenye indawo.